N'ogbe Medical Disposable Face Mask Factory and Manufacturer | Ahụike JBH
1. FDA, OA kwadoro
2.Disposable nkpuchi mejupụtara elu na-abụghị kpara akwa, n'etiti gbazee fụọ ákwà na n'ime na-abụghị kpara akwa ihe, plastic imi clip na nkpuchi belt
3. Eyi anyị mgbochi nfụkasị ájá nkpuchi na-arụ ọrụ ma ọ bụ mgbe na-aga ịnọgide na-enwe ahụ ike na nchekwa
4. Nyere gị aka iku ume nke ọma karịa site n’ichedo traktị iku ume gị site na mmetọ na mmetọ ahụ, ma debe ya ọcha karịa ka o kwere mee
5. Mgbe iyi mkpuchi ahụ, ọ ga-enwe ike ikpuchi ọnụ, imi na agba nke onye ji ya
6. Nkasi obi na-agbanwe agbanwe na-atọ ụtọ, ọkachasị nko ntị dị nro iji wepụ nrụgide nke ntị ma nye gị ahụmịhe ị na-eyi nke ọma
Ọdịdị nke ihe nkpuchi gauze nwere njigide na-adịghị mma na ihu mmadụ. Ọtụtụ obere irighiri ihe ndị na-emerụ anyị ahụ nke ukwuu ga-abanye na akụkụ okuku ume na ngụgụ site na ọdịiche dị n'etiti nkpuchi na ihu. Ihe nzacha ahụ bụ ụfọdụ akwa eji arụ ọrụ. Nanị ụzọ ị ga-esi mee ka uzuzu kpochie oke arụmọrụ bụ ime ka ọkpụrụkpụ ahụ dịkwuo elu, na mmetụta na-adịghị mma nke ịba ụba ọkpụrụkpụ bụ ime ka onye ọrụ ahụ chee na mgbochi iku ume dị ukwuu ma ghara iru ala. Ngwurugwu a na-emeso ya na-enweghị ihe ọ bụla nwere ike ọ bụghị naanị igbochi nnukwu ájá, kamakwa ụgwọ ọrụ electrostatic jikọtara na elu ya nwere ike ịdọrọ ájá dị mma site na mma electrostatic, na-enweta oke uzuzu igbochi arụmọrụ. Okpukpo nke ihe nzacha ahụ dị ezigbo mkpa, nke na-ebelata nkwụsị nke onye ọrụ ma nwee ahụ iru ala, si otú a nweta ọnọdụ atọ dị mkpa maka ezigbo ihe nzacha anyị kpọtụrụ aha na mbụ. Site na ihe nzacha dị mma na ihe nkpuchi sayensị ewepụtara, a na-eme ihe mkpuchi dị mma ma dị elu.
Ihe mgbochi nkpuchi akụkụ nke nkpuchi ahụ bụ igbochi ikuku ka ọ gafere ọdịiche dị n'etiti nkpuchi ahụ na ihu mmadụ na-enweghị ịmịchaa na nzacha. Ikuku dị ka mmiri mmiri, ebe ndị na-eguzogide dị obere, ọ na-ebu ụzọ aga. Mgbe ọdịdị nke nkpuchi ahụ adịghị nso na ihu mmadụ, ihe ndị dị ize ndụ dị na mbara igwe ga-esi na ntanye wee banye na akụkụ iku ume mmadụ. Yabụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịhọrọ nkpuchi nke kacha mma ihe nzacha. O nweghịkwa ike ichebe ahụike gị. Ọtụtụ ụkpụrụ na ụkpụrụ ndị si mba ọzọ na-ekwupụta na ndị ọrụ kwesịrị ịnwale nlele nke ihe nkpuchi. Ebumnuche bụ iji hụ na ndị ọrụ na-ahọrọ ihe nkpuchi nke oke nha ma tinye ihe mkpuchi na usoro ziri ezi.
N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ ga-adị njikere ịgwa ha iyi ha n'ebe ọrụ ma melite arụmọrụ ha nke ọma. Masks na-enweghị mmezi na mba ọzọ adịghị mkpa ka ehichaa ma ọ bụ dochie ya. Mgbe mgbochi ájá jupụtara na ya ma ọ bụ ihe nkpuchi ahụ mebiri emebi, a ga-atụfu ya. Nke a abughi naanị na-edobe ịdị ọcha nke nkpuchi ahụ, kamakwa na-azọpụta ndị ọrụ oge na ume iji kwado ihe nkpuchi ahụ. Ọzọkwa, ọtụtụ ihe nkpuchi na-agbaso ụdị arched, nke nwere ike ọ bụghị naanị na ọ ga-adị mma na ọdịdị ihu, mana na-ejigidekwa ohere ụfọdụ n'ọnụ na imi, nke dị mma iyi.
Osote: Foldable obere Ndidi nyefe Ebuli ndoli maka nkwarụ
ọta ihu mkpofu
ihe nkpuchi nwere ike wepu
nkpuchi ihu maka ọrịa
ihe nkpuchi nwere ike wepu, ndozi bed maka ndị ọrịa, onye na-eku ume ọkụ eletrik, ọgwụ na-edozi akwa, hydraulic ndidi lifter, ihe nkpuchi ihu,
ndozi bed maka ndị ọrịa, ihe nkpuchi nwere ike wepu, hydraulic ndidi lifter, onye na-eku ume ọkụ eletrik, ihe nkpuchi ihu, ọgwụ na-edozi akwa,